-Lọ ọrụ na-emepụta Q-Switched Crystals - China Q-Switched Crystals Manufacturers, Suppliers
Iji nyere aka chepụta kọmpụta ma nwee ntụkwasị obi siri ike na steeti laser, DIEN TECH na-enye usoro kristal na-agbanwe agbanwe iji kwekọọ na sistemụ ahụ, gụnyere Co2 +: MgAl2O4 (Co: Spinel), nke na-esite na 1.2 ruo 1.6μm, karịchaa, maka anya - nchekwa 1.54μm Er: iko laser, ma na-arụkwa ọrụ na 1.44μm na 1.34μm wavelengths.Cr4 +: YAG, nke bụ ezigbo ihe maka Nd: YAG na ndị ọzọ Nd na Yb dopes lasers na wavelength nke 0.8 ruo 1.2um. Ọ bụ nkwụsi ike dị elu na ntụkwasị obi, ndụ ogologo ndụ na oke mbibi dị elu.
RTP (Rubidium Titanyle Phosphate - RbTiOPO4) bụ ihe eji eme ihe ugbu a maka ngwa ngwa Electro Optical mgbe ọ bụla achọrọ voltages dị ala.
LiNbO3 Crystal nwere ihe omuma elektrọnik di iche, piezoelectric, photoelastic and nonlinear optical properties. Ha na-agbasi ike. A na-eji ha eme ihe okpukpu abụọ, ihe ngosi na-enweghị atụ, mkpụrụ ndụ Pockels, ngwa anya oscillators, ihe ntụgharị Q maka lasers, ihe ndị ọzọ acousto-opticdevices, ngbanye anya maka gigahertz, wdg.
La3Ga5SiO14 kristal (LGS kristal) bụ ngwa anya na-enweghị atụ nke nwere oke mbibi dị elu, ọnụọgụ ọnụọgụ elektrọnik dị elu na arụmọrụ elektrọnik arụmọrụ. LGS kristal bụ nke trigonal system structure, obere mmụba nke nrụpụta ọkụ, anisotropy nke mgbasawanye nke kristal adịghị ike, ọnọdụ okpomọkụ nke ọnọdụ dị elu dị mma (ka mma karịa SiO2), yana elekere elektrọn abụọ nwere onwe ha dị mma dị ka nke BBO Kristal.
Ndị na-agafe agafe ma ọ bụ ndị na-amị mkpụrụ na-emepụta ike laser dị elu na-enweghị iji electro-optic Q-switches, si otú a na-ebelata ngwugwu ngwugwu ma wepụ nnukwu ọkụ eletrik. Co2+: MgAl2O4 bụ ihe dị ọhụrụ maka ihe ntụgharị Q na-agbanwe na lasers na-esite na 1.2 ruo 1.6μm, ọkachasị, maka nchedo anya 1.54μm Er: iko laser, kamakwa ọ na-arụ ọrụ na 1.44μm na 1.34μm laser wavelengths. Spinel bụ kristal siri ike, na-agbanwe agbanwe nke ọma.
KD * P EO Q-Gbanye
EO Q Gbanye gbanwere ọnọdụ ọkụ nke ọkụ na-agafe na ya mgbe voltaji etinyere na-ebute mgbanwe birefringence na kristal electro-optic dị ka KD * P. Mgbe e jikọtara ya na ndị polarizers, mkpụrụ ndụ ndị a nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ngbanwe anya, ma ọ bụ laser Q-switches.
Cr4 +: YAG bụ ihe dị mma maka mgbatị Q-ngbanwe nke Nd: YAG na ndị ọzọ Nd na Yb lasers lasers na ntụgharị ntụgharị nke 0.8 ruo 1.2um. Ọ bụ nkwụsi ike dị elu na ntụkwasị obi, ndụ ogologo ndụ na oke mbibi dị elu.